FAQs - ज़ियामेन Toonney टंगस्टन कार्बाइड कं, लिमिटेड
तपाइँको सामान को मुख्य लाभ के हो? न्यूनतम आदेश मात्रा के हो?
हाम्रो टंगस्टन कार्बाइड रड र कार्बाइड युक्तिहरु आफ्नो उच्च गुणवत्ता र प्रतिस्पर्धी मूल्य को लागी प्रसिद्ध छन्। सख्त गुणस्तर नियन्त्रण र उच्च प्रविधि उत्पादन लाइन बाट राम्रो गुण लाभ। त्यहाँ पहिलो परीक्षण आदेश को लागी कार्बाइड रड को कुनै न्यूनतम आदेश मात्रा छैन। तर दोस्रो अर्डर मा, कार्बाइड रड को कुल मात्रा १०००USD भन्दा कम हुनु हुँदैन।
यदि म केहि कार्बाइड रड्स वा कार्बाइड टिप्स किन्न चाहन्छु भने तपाइँको भुक्तानी सर्तहरु के हो?
T/T एक राम्रो छनौट हुनेछ। एल/सी र वेस्टर्न यूनियन पनि स्वागत छ। 30% भुक्तानी उत्पादन गर्नु अघि गरिनु पर्छ, र 70% ब्यालेन्स शिपिंग भन्दा पहिले तिर्नु पर्छ। वा ठूलो मात्रा मा आदेश को लागी नजर मा एल/सी।
हामी ग्राहक को लागी व्यापक बिक्री पछि सेवा प्रदान गर्दछौं। हामी हाम्रो उत्पादनहरु को उपयोग को कुनै पनी उजुरी प्राप्त गरे पछि एक पटक बिक्री पछि सेवा प्रक्रिया शुरू गर्नेछौं। पहिलो, हामी समस्या को एक प्राथमिक निर्णय गर्नेछौं, र त्यसपछि तपाइँ हाम्रो पेशेवर प्राविधिक टीम संग यो समस्या को समाधान गर्न को लागी मद्दत गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यदि हामी तपाइँको रिपोर्ट अनुसार समस्या पाउन सक्दैनौं, तब हामी केहि नराम्रो वस्तुहरु (पक्कै, हामी ढुवानी शुल्क को लागी तिर्नेछौं) थप अनुसन्धान को लागी पठाउन को लागी तपाइँको मद्दत को आवश्यकता हुन सक्छ। समस्या संग आइटम जाँच पछि, हामी कारण र समाधान पत्ता लगाउनेछौं, तब हामी तपाइँलाई एक राम्रो समाधान को लागी प्रस्ताव गर्दछौं। यदि आवश्यक छ, हामी नयाँ उच्च योग्य उत्पादनहरु प्रतिस्थापन को लागी स्वतन्त्र रूपमा रीमेक गर्नेछौं। (पूर्व शर्त यो हुनु पर्छ कि समस्या आफै उत्पादन साबित हुन्छ, न कि अन्य कारकहरु, जस्तै गलत डिजाइन, शिपिंग को कारण केहि समस्याहरु)
के तपाइँ मलाई तपाइँको कार्बाइड रड्स कारखाना को बारे मा अधिक जानकारी दिन सक्नुहुन्छ?
Toonney कारखाना तीन तला, कार्यशालाहरु को बारे मा 8000 वर्ग मीटर को कभर छ। हामी सूत्र तैयार बाट अन्तिम समाप्त उत्पादनहरु, मोम मिश्रण र सुखाने मिसिन, बल मिल, debininding Sintering फर्नेस, प्रेस, सीआईपी, सीएनसी गठन मिसिन, निकासी मिसिन, sintering भट्ठी को लागी पूरा उत्पादन लाइन छ। र निरीक्षण उपकरण, उदाहरण को लागी, उच्च आवर्धन metallographic माइक्रोस्कोप, HV, HRA परीक्षक, SEM, कार्बन विश्लेषक, T-RS परीक्षक। Toonney को लाभ आफ्नो पेशेवर प्राविधिक टीम र सख्त गुणस्तर नियन्त्रण systerm छन्। तपाइँलाई यस उद्योग मा हाम्रो साथ सहयोग गर्न को लागी स्वागत छ।
तपाइँको कार्बाइड रड्स 'मुख्य बजार के हो?
हाम्रो छडी को लागी को लागी मुख्य oversea बजार संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, र एशिया हो। हामीले २०११ मा कम्पनीको स्थापना पछि कार्बाइड रड बिजनेस गर्न थाल्यौं। त्यो भन्दा पहिले, हाम्रो टेक्निकल टीम निर्माण र sintering भट्ठी निर्यात गरीरहेको छ, यसबाहेक, हामी 2008 बाट कडा धातु सामाग्री उत्पादन गर्ने मेसिन मा ब्रान्ड थ्रोन को स्थापना, एशिया प्रसिद्ध ब्रान्ड अब सम्बन्धित छ हाम्रो अर्को कम्पनी सिंहासन VACUUN टेक्नोलोजी कम्पनी को लागी।
कार्बाईड रड वा कार्बाइड टिप्स को लागी तपाइँसँग के प्रमाणपत्र छ?
अब सम्म, हामी कार्बाइड रडहरु र सुझावहरु उत्पादन मा9पेटेन्ट मालिक।
एक बाहिर निकाल्ने उपकरण टंगस्टन कार्बाइड उत्पादन गर्न को लागी लागू भयो
एक टूली carb कार्बाइड खाली demention मशीनिंग को लागी लागू भयो
एक स्थिरता मोल्ड कोर मशीनिंग को लागी लागू भयो
एक स्थिरता मोल्ड निब मशीनिंग को लागी लागू भयो
भट्ठी sintering को लागी एक बकवास निर्वहन उपकरण
थकित कोठरी संग एक निराशा कोन निब
के तपाइँको कम्पनी कुनै पनि व्यापार शो मा भाग लिनुभयो?
हामी क्यान्टन मेला, CIMT, फास्टन प्रदर्शनी, DMC चीन मा हरेक बर्ष मा भाग लिन्छौं, र हामीले हाम्रो oversea प्रदर्शनी योजना २०१५ को दोस्रो आधा बर्ष शुरू गरेका छौं। पहिलो ट्रेड शो हामी भाग लिन शिकागो मा FEBTECH2015 थियो।
के तपाइँ अनुकूलित कार्बाइड छड वा अन्य कार्बाइड उत्पादनहरु बनाउन सक्नुहुन्छ?
हो। सबै आकार र कार्बाइड छड वा अन्य उत्पादनहरु को आकार अनुकूलित गर्न सकिन्छ। उदाहरण को लागी, कदम आकार, कार्बाइड टिप र विभिन्न बिभिन्न आकारहरु संग बिभिन्न उपयोग अनुसार, धेरै ग्राहकहरु को आवश्यकताहरु को लागी अत्यन्त जटिल हुन सक्छ। प्रत्येक अनुकूलन को लागी, तपाइँ केवल विस्तार मा आवश्यकता को वर्णन गर्न को लागी, वा विस्तार चित्र को साथ राम्रो गर्न को लागी आवश्यक छ, तब हामी तपाइँको आवश्यकताहरु अनुसार उत्पादनहरु बनाउनेछौं।